RASMI: Tottenham oo shaacisay inay si rasmi ah u dhameystirtay heshiiska Ryan Sessegnon – Gool FM
RASMI: Tottenham oo shaacisay inay si rasmi ah u dhameystirtay heshiiska Ryan Sessegnon
Dajiye August 8, 2019
(London) 08 Agoosto 2019. Kooxda Tottenham ayaa shaacisay inay si rasmi ah u dhameystirtay heshiiska daafaca garabka bidix ee Ryan Sessegnon, isagoo kaga soo biiray naadiga Fulham heshiis waqti dheer ah.
Kooxda reer London ayaa waxay si rasmi ah ugu shaacisay website-keeda iyo boggaga ay ku leedahay baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter inay dhameystirtay heshiiska Ryan Sessegnon, wuxuuna qalinka ku duugay heshiis gaaraya ilaa iyo 2025-ka.
Spurs ayaa halkeeda kasii waday dhaq-dhaqaaqeeda xoogan ay ka waday suuqa xagaaga ilaa iyo maalinta ugu dambeysay iyadoo ka sameysay heshiisyada xiddiga reer Argantina ee Giovani Lo Celso, kaasoo ay kala soo wareegtay Real Betis iyo sidoo kale Ryan Sessegnon.
Ryan Sessegnon ayaa u saxiixay Tottenham heshiis 6 sano ah, kaasoo ku kacay qiimo dhan 25 milyan ginni, sida laga soo xigtay BBC Worldwide.
RASMI: Arsenal oo ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska daafaca kooxda Celtic ee Kieran Tierney
Waa kee xiddigii ugu fiicnaa ee booska daafaca garabka middig? – Waxaa ka jawaabaya Nelson Semedo